लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पुजा यसरी गर्नुहोस्, हुनेछ तत्काल धन लाभ ! – Online Khabar 24
लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पुजा यसरी गर्नुहोस्, हुनेछ तत्काल धन लाभ !
शुक्रवार लक्ष्मीको विशेष दिन हो । लक्ष्मी धनकी देवी हुन् । त्यसैले धन प्राप्त गर्न चाहनेले लक्ष्मीको आराधना गर्नुपर्ने धार्मीक विश्वास छ ।
आज शुक्रबार हिन्दूधर्मावलम्बीले सन्तोषी माता र वैभव लक्ष्मीको उपासना गर्ने धार्मीक प्रचलन छ । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजाआराधना गरे घरमा धनका साथै समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ ।
शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको पूजा गरे प्रेम र धन प्राप्त हुन्छ । ग्रहहरुमा सबैभन्दा चम्किलो ग्रह शुक्र हो । शुक्र ग्रहलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ । जसको जन्म कुन्डलीमा शुक्र आफ्नो दशाको कारण अशुभ फल दिइरहेको छ । र यसको प्रभावले विभिन्न रोगको सामना गर्नु परिरहेको छ भने शुक्रलाई खुशी बनाए बिग्रिएको ग्रह सुद्दिकरण गर्नुपर्छ ।
शुक्र ग्रहको पीडा भोग्नुभएको छ भने यसको शान्ति सुद्दिका लागि सेतो रंगको घोडा दान गर्नुपर्दछ । रंगीन वस्त्र, रेशमी कपडा, घिऊ, सुगन्ध, चिनी, खाद्य तेल, चन्दन, कपुरको दानले शुक्र ग्रहको विपरित दशामा सुधार हुनेछ । शुक्रसँग सम्बन्धित रत्नको दानले पनि लाभ मिल्नेछ ।
यस वस्तुहरुको दान शुक्रबारको दिन सन्ध्या कालमा कुनै युवतीलाई दिनु उत्तम हुन्छ । शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित दशाले समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने शुक्रबारको दिन व्रत बस्नु पर्दछ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prev१५ मिनेटको समय, बीचमा सिसाको भित्तो, रूदै शाहरुख खानले यसरी भेटे छोरालाई !
nextजागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ? या हातमा पैसा टिक्दैन? गनुहोस् यस्तो उपाय, मिल्नेछ तत्काल लाभ !